Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL: Somaliland.Org
February 28th, 2009 Comments Off Warbixin shaaca ka qaaday meeqaamka hirgelida doorashadu gaadhsiin karto Somaliland Nairobi (The Economist/Ogaal)- Maqaal uu shalay daabacay wargeyska The Economist ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in ka dib 18-kii sannadood ee la soo dhaafay xaaladihii Soomaaliya ay yartahay fursada Madaxweynaha cusub ee dalkaas iyo Madaxweynaha Maraykanku ay u haystaan inay talaabooyin horumar leh ka gaadhaan.
“Wadanka ugu burburka badan adduunka (Soomaaliya) ayaa soo gaadhay wadooyin is-gawracaya. Doorashooyinkii dhawaan lagu doortay Sheekh Shariif inuu madaxweynaha Soomaaliya noqdo ayaa la rajaynayaa inay fursad u noqon karto amaankii oo soo noqda inka badan labaatan sannadood.” Ayaa ka mid ahaa qoraalka maqaalka wargeysku faafiyay. Ka sokow, faaqidaada arrimaha Soomaaliya wargeysku wuxuu ka hadlay arrimo la xidhiidha Cabdillaahi Yuusuf, “Madaxweynihii talada Soomaaliya laga tuuray ee Cabdillaahi Yuusuf oo ahaa dagaal-oogihii Puntland waxa uu boqolaal dablaydiisii ka mid ahaa ka soo ceshaday Muqdisho, isla markaana wuxuu immika iskii ugu raaxaysanayaa badiba magaalada Boosaaso iyo ganacsigiisa gaarka ah.” Wargeyska oo warbixintii maqaalkiisa ku soo daray Somaliland, waxa qoraalkiisa ka mid ahaa; “Somaliland waa dhul uu hore u gumaysanayay Ingiriisku, waxaanay si xidhiidh ahayd u xasiloonayd tan iyo markii ay ku dhawaaqday inay ka madaxbanaan tahay Soomaaliya sannadkii 1991-kii. Hadii haddaba, doorashooyinka soo socdaa ay si wanaagsan halkaa (Somaliland) uga dhacaan, iyada oo codeeyeyaashuna ay isticmaalayaan kaadhadhka aqoonsiga la siiyay, waxa laga yaabaa in si tartiib ah uu ugu bilaamo oo ay ku guulaystaan aqoonsi uga yimaada qaar dalalka Afrikaanka ka mid ah iyo kuwo kale oo khariirad ahaan ka fog. Ma kala cada waxa uu Mr Shariif Sheekh Axmed ka aaminsan yahay madaxbanaanida Somaliland. Laakiin muwaadiniinta kale iyo kooxaha jihaadiyiinta ahiba si adag ayay taas uga soo horjeedaan, sidaa si la mid ah ayay uga soo horjeedaan Puntland oo murano xuduudeed ay ka dhexeeyaan iyada (Somaliland).” Wargeysku wuxuu sheegay in toddbaadkii la soo dhaafay Madaxweyne Shariif iyo golihiisa wasiirradu tageen Muqdisho. “Ololihiisa uu ku sheeganayo inuu ku burburinayo kooxaha jihaadka sheegtay ama uu ku kala daadinayo kooxahaas oo dalka masaxay, isla markaana uu dhisayo dawlad loo dhan yahay ayuu la tegay. Soomaaliya oo aan lahayn dawlad dhexe tan iyo sannadkii 1991-kii, ka dib markii nidaamkii Siyaad Barre ay isku mar dhaceen dagaalkii qaboobaa, wax ma ka bedeli karaa maamulka Shariif Sheekh Aadan?” ayuu wargeysku is-waydiiyay. Waxaanu qoraalku intaa ku daray, “Mr Axmed hawl adag ayaa hortaala. Bilawgaba ma hayo wax u eg xataa dawlad. Wasiiradiisa oo ka kala yimi islaamiyiinta, muwaadiniin taageersan inaan diin lagu dhaqmin, dagaal-oogayaal iyo kuwo shacab ahaa, ayaan wax dakhli ah gacanta ku hayn. Waxaana Madaxweyne u doortay baarlamaan aan iyaguba joogin dalka gudihiisa. Xubnihiisuna ku shaqeeyaan taageerada deeq-bixiyeyaasha, isla markaana joogay huteel ku yaala meel u dhaw caasimada Djibouti. Dhawr toddobaad ka horna kooxaha islaamiyiinta jihad-u-dirirka ayaa qabsaday magaalada Baydhaba oo fadhigii baarlamaanka ahayd.” “Al-shabaabtii hore waxa kala daadiyay duqayntii ciidamada Itoobiya iyo duulaankii Maraykanka ee cirka laba sannadood ka hor. Hase ahaatee, hadana abaabul badan oo soo galeen ka dib way ka soo kabteen. Guulaha ay gaadhayeena waxa qayb ka ahaa lacagta: waxay lacago siiyaan dhalinyarada Soomaalida ah si ay ugu dagaalamaan. Waxaanay sidoo kale ka faa’iidaysteen go’aankii uu Madaxweyne George Bush maamulkiisu ku gaadhay in la go’doomiyo islaamiyiinta furfuran sida Sheekh Shariif, isla markaana ay ku dooneen inay dhinaca saaraan qab-qablayaal dagaal oo aan diinta jeclayn, taariikh argagixisanimo lahaydna ku dhex-lahaa bulshada.” Ayuu wargeysku ku sheegay maqaalkiisa. Warbixinta wargeysku waxay intaa ku dartay in sannadihii la soo dhaafay uu ururka Al-shabaab ka soo bilaabmay tiro aan ka badnayn dhawr boqol, balse uu gaadhay kumanaan dagaalyahan. “Kooxaha maamula Kismaayo iyo Marka ayaa gacanta ku haya tiro ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho. Waxaanay hantiyeen wershadihii, bakhaarradii, dekedihii iyo garoomadii diyaaradaha oo loo geeyay lacago kaash ah oo ay ka helaan deeq-bixiyeyaal carab ah, kuwaasoo Soomaaliya u arkaya inay tahay goob muhiim u ah jihaadka caalamiga ah. Dagaalyahanka gudaha iyo ajaanibka ee ka tirsan Al-shabaab ama xidhiidhka la leh ayaa lagu tabobaraa kaamam ku teedsan xeebaha Soomaaliya iyo dhulalka kaymaha ah. Waxaanay doonayaan inay abuuraan wadan islaami dhab ah, waxaanay rajaynayaan inay raadiyaan Soomaalida Itoobiya iyo Kenya. Al-shabaab waxay diyaar u tahay inay keeno naftood-hurayaal is-qarxin ku sameeya gudaha dalka iyo dibadahaba si ay qadiyadooda u sii fogeeyaan.” Sidaasna waxa lagu sheegay qoraalka wargeyka The Economist.
Ma Al-shabaab ayaa dalka wada qabsan doonta?
“Dhawrka bilood ee soo socda, dawladaha dalalka xidhiidhada taariikheed, bani’aadaminimo, dhaqaale iyo istaraatiijiyadeed la leh Soomaaliya oo ay ku jiraan dalalka ay jaarka yihiin ee Afrikaanka ah, Maraykanka, Talyaaniga, Ingiriiska, Iswidhan, Sucuudiga iyo dalalka gobolka gacanka, ayay waajib ku tahay inay go’aan ka gaadhaan hadii ay waqti iyo lacagba ku siinayaan Mr Axmed fursad uu ku badbaadiyo dalkiisa aafoobay. Hadii aanay sidaa yeelin, aad buu u guuldaraysan doonaa isagu, dalkuna u guuldaraysan doonaa.” Ayuu yidhi wargeysku. Wuxuu sheegay inaanay immika jirin cid dalka Soomaaliya maamusha Al-shabaab iyo dawlada Sheekh Shariif toona. Balse, xaqiiqdii intii Sheekh Shariif maamulka qabtay wuxuu wargeysku sheegay inay aad sare ugu kacday Al-shabaab. Waxaanu maqaalku intaa raaciyay in hanaanka dhismahooda marka loo eego oo 20 ilaa 30 ninba ay unug yihiin, mid kastaana uu gaar u yahay maamulkoodu ay markaa aad u adkaan doonto in laga adkaado. Isla markaana waxa ka sii adag ayuu yidhi wargeysku in lala dagaalamo, sidoo kalena waxa aad u adag in ciidamo amaanka oo ajaanib ahi ay la dagaalamaan. “Si fudud ayay isaga gudbaan Soomaaliya iyo Kenya, halkaas ayaanay uga sii gudbaan bushooyinka Soomaalida ah ee Yurub iyo Ameerika ku kala nool. Hay’adaha Sirdoonka Ajaanibka ahi waxay u malaynayaan in Al-shabaab weeraro argagixiso oo ay ku qaado ha dhawaato ama ha dheeraato Nairobi ay muuqato. Qaar ka mid ah diyaaradaha ayaa dhakhso u joojin doona duulimaadyadooda Jomo Kenyatta Airport ee Nairobi baqdin aawadeed. London iyo caasimado kale oo reer galbeed ah ayaa sidoo kale yool u noqon kara.” Markaa muxuu noqonayaa xalku?
“Hadii ay ajaanib ka qaybqaadan lahaayeen iyo hadii kaleba nabad-ilaalin waxa lagu soo guuldarayanayay 18-kii sannadood ee la soo dhaafay. Tan iyo Siyaad Barre dhicitaankiisii kama yara 16 jeer inta dedaalo nabadeed loo galay Soomaaliya. Waxaana laga yaabaa inuu Mr Axmed-na guuldaraysto sidoo kale. Waxa jira dad fara badan oo ka faa’iidaysta dagaalada dabada dheeraaday, isla markaana doonaya inuu sii socdo. Dad badan oo Soomaaliya daawanayaana waxay aaminsan yihiin in Soomaalida arrimeheeda iyaga loo dhaafo, isla markaana ajaanibku ay ka fogaadaan. Siyaabaha qaarkoodna waa loo burburin karaa Al-Shabaab, taasoo markaa xubno ka mid ah u keeni karta Sheekh Shariif. Inkasta oo aanay Al-Shabaab ahayn kuwo ka go’aya waxay ku andacoonayaan, hadana maadaama itoobiyaanku dalka ka baxeen rikoodhkooda hoos baa loo dhigi karaa. Hogaamiyeyaashooda Muqtaar Roobow iyo Xasan Turki, ayaa laga yaabaa inay go’doomaan hadii uu Madaxweyne Shariif gacanta ku dhigo dagaalyahanka faraha badan ee ka soo jeeda qabiilkiisa Hawiye. Waxaana jewigaasi ka muuqday oo immikaba qaatay hogaamiyihii Al-shabaab oo saamayn badan ku lahaa, kana soo jeeda dhalasho ahaan Jawhar, kaasoo isbedel la yimi.” Ayuu ku taliyay qoraalka maqaalkani. Waxaanu intaa raaciyay in maamulka cusub ee Maraykanku uu sidoo kale caawin karo maamulka cusub ee Soomaaliya. Wefti uu hogaaminayo Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland oo lagu qaabilay aqalka Baarlamaanka Ingiriiska
London (Ogaal)- Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland oo uu weheliyaan hogaanka xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa